Ny hoe ny wingwoman no asa manan-danja! Tsy maintsy mba ho azo antoka fa ianao fanorenana fahatokiana sy maka ny sekely iray zavatra rehetra izao amin'ny Mandehana. Fa izany no namana dia ho ary manantena izy ireo fa hanao toy izany koa raha toa ny kiraro sy rehefa eo amin'ny hafa tongotra. Aho atambatra toro-hevitra fa mihevitra aho fa misy wingwoman mendrika ny sira mahalala misy zillion kokoa. Amin'ny fomba Mino aho fa misy wingwoman mahalala fa mianatra foana isika eo amin'ny asa – ary tsy nisy vola!
Ny namana dia handeha hihaona mahatsiravina ny olona sasany teny an-dalana. Indrisy anefa izany no fiainana. Fa raha tsy afaka manao na inona na inona momba izany ianao, dia tokony ho nisy ny hanenjika misokatra ny Ben & Jerry ny rehefa avy, ary ho any fotsiny ho azy ireo. Hahazoana antoka fa fantany fa nanao ratsy na inona na inona ary izy ireo hihaona Ho olona mifanaraka tsara kokoa ho azy ireo amin'ny ho avy. Mazava ho azy fa raha toa ka manao hoe: be dia be ny lozabe zavatra eo amin'izao fiatoana-ny ianao, dia mety tsy maintsy mandeha amin'ny alalan'ny sasany ireo amin'ny an-tsipiriany, na tsotra izao mihaino. Satria Efa naratra izy ireo dia mila hahazo fa avy ny rafitra. Oh ary antoka ho ratsy momba ny taloha!
Antoka Izy Ireo Azo Antoka
Tsaroako aho indray mandeha mandre ny vondrona ny namana miresaka sy nandre ankizivavy iray miresaka momba ny handeha an-trano miaraka amin'ny bandy izay somary mampatahotra ny alina talohan'ny. Soa ihany fa maninona izy Niady mafy izy mba hahazo kely ao an-tranony ny ampitso. Ny fanehoan-kevitra avy hatrany dia nahoana no tsy ny iray tamin'izy ireo handeha hiaraka aminy, raha izy dia somary mampatahotra raha lazaina fa izy ireo mba ho namany? Heveriko fa mety ho somary sarotra, satria sarotra ny manaiky an-lehilahy ny trano raha tsy nasaina, fa Heveriko manokana dia raha nieritreritra vadiko nandeha an-trano miaraka amin'ny mikisaka aho hiezaka ny mafy na dia nieritreritra very saina aho mba in ary ny ambony seza hatory! Tamin'ny tsy izay aho mba ho azo antoka ho an-telefaonina ho azy ireo mba hahitana raha toa izy ireo maninona. Mazava ho azy fa ny tahotra dia mba hieritreritra ianao tonga manerana ny-fiarovana fa mieritreritra izany any aoriana any dia hahafantatra namana iray ianao manao izany noho ny fiarovana. Ary ny tsara lavitra noho ny hafa ny zavatra mety hitranga amin'ny namanao sy ny zavatra mampalahelo toy izany matetika no.
Ny fananana Essentials amin'ny Stand-By
Izay no mavesatra somary atao any amin'ny tapany teo aloha. Ary teo ny Fun Stuff! Ny wingwoman mahalala fa ianao no mila ny tahirin ny make-up, volo borosy, tohotra, sns … amin'ny jiro-by. Amin'izay raha ianao na ny mahita olona tianao ianao afaka roa anjara amin'ny tsirairay ny zavatra hafa mety efa nanadino mba hijery ny knockout sy hampiaiky volana ny olona iray manokana.
Ny fandraisana andraikitra amim Skills
Tsy aho hoe tokony ho Oscar-mendrika na inona na inona ny tahaka. Tsy afaka manao ny bokotra, fa rehefa mandeha ny fotoana ianao dia hianatra hanao zavatra fa liana ianao raha tsy ianao indrindra. Ny zavatra momba ny olona rehefa tia olona (Ary tsy misy amintsika afaka diss na iza na iza satria efa rehetra tonga any!) dia izy ireo miresaka momba azy ireo be dia be. Ary ianao dia tsy handeha ho nandiso liana amin'ny zavatra rehetra hoy izy ireo ny fotoana rehetra, fa ho an'ny ankamaroan'ny hafa ianao mila mitsiky fotsiny sy interject amin'ny teny toy ny “Marina?”, “Oh mangatsiatsiaka.”, “Eny, dia tantaram-pitiavana” ary tokony ho tsara. Izy ireo liana aoka izany amin'ny firesahana momba ilay olona dia tsy hahatsikaritra.
Aoka Available ny hiresaka
Raha miasa ianao, na inona na inona tamin 'ny fotoana hafa izany. Fa raha ny zavatra izay ianao manao izay afaka miandry foana ny mametraka ny namanao aloha raha toa ka manana olana lehibe izay ilainy mba hiresaka aminao momba ny. Raha toa izy ireo manao azy io foana, ary ianao tsy afaka ny nanao na inona na inona, na izy ireo tsy hanao toy izany ho anareo tany hiverina mba tokony handinika indray fa fa raha manana namana tsara ho azy ireo ho any, mitady ho azy ary tsy afaka tena manao intsony noho ny maha-tsara na ny namana wingwoman.